Xiddiga GoT Carice van Houten ayaa sheegtay inay soo diyaarisay Muuqaalka Qiyaame ee Jon Snow - Dhaqanka Pop
Xidigaha GoT Carice van Houten ayaa Sheegtay Inay Soo Saartay Sh*t Out of Jon Snow Resurrection Scene
Ka dib markii ku guuleystay a diiwaan Abaalmarinta afaraad ee Emmy ee Jilaaga Taageerada Wanaagsan ee Taxanaha Riwaayadda xalay, Peter Dinklage, oo ciyaaray Tyrion Lannister, ayaa qayb ka mid ah hadalkii aqbalaaddiisa ka soo baxay.
si fiican ayaa loo qabtay Peter Dinklage
Guushii 4aad ee Emmy ee Taageerida Jilaaga oo ciyaaraya Tyrion Lannister
hadal aqbalaad buuxda #Emmys2019 pic.twitter.com/qb824BLBX7
- Emilia & amp; Lena way u qalantaa mid ka sii fiican (@shan_shan) Sebtember 23, 2019
Haddii aad la yaabban tahay wuxuu yiri, Dinklage wuxuu qirayay '10kii sano ee dhididka buuxa ee aan la abuurin Ciyaarta Carshiga ka hor intuusan ku tilmaamin bandhigyada kabka iyo shaqaalaha sida 'dadka ugu kartida badan, uguna foosha xun.' Ka dib maqnaanshahaas faafreebka shaqsiyeed, Dinklage wuxuu u sheegay dhagaystayaashii la yaabay, 'Haye, way dhammaatay, dan kama lihi.'
sida loo sameeyo fondant for keega
Dabeecaddaas IDGAF -ku waxay noqon kartaa dareen socodsiinaya kabka Carshiyo hadda show -ga HBO ee la garaacay wuxuu ku jiraa muraayadda gadaasha gadaal oo leh gabagabada Emmys.
Halka hadlaya leh Wariyaha Hollywoodka ka dib xafladdii Axadaha, Carice van Houten, oo sawirtay Melisandre, ayaa shaaca ka qaaday inay 'hagaajisay waxqabadkeedii' ee soo nooleynta Jon Snow laga bilaabo Xilligii 6.
sida loo sameeyo kareemka karbaashka ee qurxinta keegga
'Soo nooleynta oo dhan, sarakicidda Jon Snow, waxaan hagaajiyay ceebtaas,' ayuu yiri Van Houten. 'Cidina ma arag. Waxaan ula jeedaa, Waan hubaa inay jiraan dad yar oo yiri, waan ogaa waxaad sheegaysay inay khaldan yihiin. Waan ka xumahay. Laakiin, waad ogtahay, waxay ahayd waqti adag. Waxay ahayd maalin dheer, mana aanan garanayn khadadkayga.
Hagaajinteeda muuqaalkaas waxay ka timaadaa iyada oo ku hadlaysa High Valyrian, oo ah luuqad ay qirtay inay ku dhibtootay inay ku hadasho iyada oo aan lahayn khadad asalkeeda. 'Ma jirto wax tixraac ah,' ayay tidhi. 'Waa sida,' Miyaan ku hadlaa Cibraaniga? Giriig? Waa maxay luqaddani? Laakiin waxay ahayd madadaalo sababtoo ah waxaan sidoo kale dareemay haddii aan khalad sameeyay, qofna ma dareemi doono.
Sida van Houten looga shakisan yahay, khaladka sare ee Valyrian lama ogaan karo, taas si ka duwan koob qaxwe nacas ah .
Meel kale ee wareysi , Van Houten ayaa la wadaagtay ra'yigeeda ku aaddan dhammaadka muranka dhaliyay ee showga. Wax walba waa la waayay. Runtii waan jeclaaday, iyo sidoo kale kala sooc la’aanta ka hadlida qofka boqor noqon doona. Nacasnimadu waxay ahayd mid aad u caqli badan. Waxaan moodayay, 'Tani waa waxa noloshu tahay. Dumbo qaarkood waxay noqon karaan madaxweyne, '' ayuu yiri van Houten. 'Taasi waa adduunka aan ku noolnahay ... Waannu kala tagnaa uun,' Uh, ninkaas. ' Waxay ahayd caqli in ay ahayd uun nooc doqonimo ah. Runtii waan ka helay, inaan daacad noqdo. '
waxaad tuubeysaa sida loo sameeyo fondant
inta jeer ee netflix ku darto filimada
nadiifintu ma dhici doontaa mustaqbalka
kariimka karbaashka barafaysan ee leh gelatin